Graphic Designer - Male (or) Femal (1) Post at NGWE OAK TRADING COMPANY LIMITED | MyJobs
/ Graphic Designer - Male (or) Femal (1) Post
- Any Graduate person, good personality.
- Age between 25~30 years.
- Must have at least3years’ experience in the related field.
- Can use Adobe Photoshop, illustrator software and Corel draw software.
Photoshop , Illustrator ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Creative idea ဖြင့်ဖန်တီးမှုများအား အနုပညာဆန်စွာသေသပ်လှပရမည်။
Social Media Facebook Page များ နှင့် Vinyl စသည်ဖြင့် အများနဲ့မတူဆန်းပြားသည့် Idea များနှင့်လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
Advertising Plan အတိုင်း ကြော်ငြာများထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခြင်း
Exhibition ပွဲများ၊ Promotion ပွဲများအား ကြော်ငြာနိုင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခြင်း
Exhibitions ပွဲများအတွက် ပြခန်းဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခြင်း
Customers များအား လက်ဆောင်ပေးရန်အတွက် Marketing Kits များအား တွက် ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခြင်း
Service ရရှိသောနေရာများ၊ လူစည်ကားသော နေရာများပေါ် မူတည်၍ Billboard (သို့မဟုတ်) LED Logo Board အား ကြော်ငြာနိုင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲခြင်း
အရောင်းစင်တာများအတွက် လိုအပ်သော Flyers များ Promotion ကြော်ငြာစာရွက်များ၏ ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်စွက်ပြီး ဒီဇိုင်းအသစ်ပြုပေးခြင်း
(Billboard, Journal & Newspaper etc.) တို့တွင် ကုန်အမှတ် တံဆိပ် ကြော်ငြာခြင်း အတွက် ဒီဇိုင်းများရေးဆွဲပေးခြင်း
journal , သတင်းစာ, Magazine များအတွက် လစဉ် Design အသစ်များ ရေးဆွဲခြင်း စသည်တို့လုပ်ဆောင်တက်ရမည်။
သင်၏အရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားပါက Salary နှင့်တကွ PORTFOLIO အား ngweoakdigital@gmail.com သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Salary -4lakhs -6lakhs